Comment Obtenir plus de J'aime sur Instagram : Amathiphu angu-15 nezinhlelo zokusebenza ezihamba phambili
Ungakuthola kanjani ukuthandwa okuningi ku-Instagram : Amathiphu angu-15 nezinhlelo zokusebenza ezihamba phambili
Ukuthandwa kuyimali eyigugu kakhulu ku-Instagram. Lapho okuthunyelwe kwakho kwe-Instagram kuthola ukuthandwa okwengeziwe, kubonakala kuphezulu kokuphakelayo kwezindaba kwabasebenzisi. Ngokwandisa inani lokuthandwa kwakho, futhi uqinisekisa ukubonakala okukhulu kokuthunyelwe kwakho okuzayo, ngoba i-algorithm yesikhulumi izama ukukhombisa abantu okuningi kwalokho ababekade bekuthanda ngaphambili.
Sihlanganise lo mhlahlandlela wokuthi ungakuthola kanjani ukuthandwa kwe-Instagram ukuze sikusize uthole lezi zinzuzo..
Nazi iziphakamiso eziyishumi nanhlanu:
Facebook. Sabalalisa Izithombe Ezisezingeni Eliphezulu
Kufanele kuhambe ngaphandle kokusho, kodwa abantu abaningi abakubukeli phansi ukubaluleka kokuba nezithombe zekhwalithi ephezulu. Ngeke uthole ukuthandwa okuningi uma isithombe sakho sinezinhlamvu, i-pixelated noma emnyama kakhulu.
Facebook. Dala Amazwibela Athakazelisayo
Uma ukulanda izithombe ezisezingeni eliphezulu kubalulekile, akwanele ; incazelo yakho kufanele futhi ithakazelise, ezikhangayo noma ezicebile ngenani elengeziwe.
Facebook. Sebenzisa Ucingo Lwesenzo
Izithameli zakho ngeke zikwazi ukukunikeza lokho okufunayo uma ungazitsheli lokho okufunayo. Vele ufake ucingo esenzweni ekupheleni kwegama-ncazo lakho ukuze ucele Ukuthandwa. Isicelo esilula somusa singakhuphula inani lababekhona kakhulu..
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe. Ukuqonda Izilaleli Zakho
Uke wakuzwa ngaphambili, futhi uzokuzwa futhi. Udinga ukuzijwayeza izethameli zakho ozihlosile.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe. Faka i-Geolocation kokuthunyelwe ngakunye
Lapho abantu bebuza ukuthi bangakuthola kanjani ukuthandwa ku-Instagram, enye yezinto zokuqala okufanele uzenze ukubona ukuthi ngabe basebenzisa i-geotagging ezithombeni zabo. Lona ngumbhalo “indawo” okuvela ngenhla kwesithombe.
6. Usuku ngalunye, faka u Like kanye no Comment
Ufuna ukwazi ukuthi ungakuthola kanjani ukuthandwa ku-Instagram? Kufanele uzinikeze ! I-Instagram iyindlela enezindlela ezimbili. Udinga ukuchitha isikhathi uxhumana nabantu uma ufuna ukuthuthukisa ukuhlanganyela kwakho.
7. Sebenzisa ama-Hashtag Afanelekile
Ufuna ukwazi ukuthi ungakuthola kanjani ukuthandwa okuningi ku-Instagram ? Sebenzisa ama-hashtag alungile ! Lokhu kubalulekile hhayi nje ukuthuthukisa ukuthanda kwakho, kodwa futhi nalo lonke isu lakho le-Instagram.
8. Khuthaza abanye ukuthi “Maka u-Ami”
Ukuze uthole ukuthandwa okuningi ku-Instagram, izithombe zakho kufanele zibonwe abantu abaningi. Sebenzisa ukubizela esenzweni okukhuthaza abalaleli bakho ukuthi bamake umngani kokuthunyelwe kwakho kokugcina ukuze wandise ngokushesha inani lomthamo kokuphakelayo kwakho.
9. Sebenzisa izindaba ze-Instagram njalo
Izindaba ze-Instagram banabasebenzisi abasebenzayo nsuku zonke abayizigidi ezingama-500 emhlabeni wonke kusukela ngoJanuwari walo nyaka, okukhombisa ukuthi izindaba zibaluleke kakhulu ukuba zinganakwa. Ukusebenzisa Izindaba akukuvumeli kuphela ukuthi ufinyelele izethameli eziningi, kodwa futhi ingashayela ithrafikhi kokuthunyelwe kwakho kwakamuva futhi ithuthukise ngokushesha ukuthanda kwakho!
10. Thuthukisa Umkhiqizo Wakho Oyintandokazi noma Bamba ama-Sfs
Ubulokhu ulandela i-akhawunti ethile kamuva nje ? Bazise ngokubalula ezihlokweni noma ezindabeni zakho. Wonke umuntu omakwe esihlokweni sakho uzothola isaziso, futhi cishe kuqinisekile ukuthi bazoza kokuphakelayo kwakho futhi bakunike okunye okuthandayo.
11. Yisho ama-akhawunti ezihlobo zakho kokuthunyelwe kwakho
Kuwo wonke amaposi othumelayo, maka abantu nezinkampani ezithintekayo. Ukumaka kokuthunyelwe kwakho kufana nokubanika amazwibela inqobo nje uma bekwaziswa ngereferensi., okudonsa ukunaka komkhiqizo kanye nezethameli zalo!
12. Hlela umncintiswano
Ukusingatha umncintiswano we-Instagram akuyona nje injabulo yabalandeli bakho, kodwa futhi kungakhuphula kakhulu ukuthanda kwakho nokubhalisele. Ukutshela ababambiqhaza ukuthi kufanele bathande into yakho ukuze bangenele umncintiswano kungakusiza ukuthi ukwandise ukuthanda kwakho kakhulu..
13. Yaziwa Kwezinye Izingxenyekazi
Ukukhangisa izinto zakho ngokuphambanayo kuyisibonelo esihle sendlela yokuthola ukuthandwa okwengeziwe ku-Instagram. Njengoba kungezona zonke izithameli zakho ezizohlala zibona okuthunyelwe kwakho kwe-Instagram, Udinga ukuqiniseka ukuthi impahla yakho ye-Instagram iyatholakala kumalungu ezilaleli zakho kuyo yonke inethiwekhi yokuxhumana nabantu oyisebenzisayo.
14. Shicilela njalo
Ngeke ulindele ukuthola ukuthandwa okwengeziwe uma izethameli zakho ozihlosile zingabuki ama-athikili akho. Ishejuli yokuthumela evamile igcina ibhizinisi lakho liphezulu ezingqondweni zabantu, Kukumise kahle nge-algorithm ye-Instagram futhi kungakhuphula ngokumangalisayo ukuthandwa kwakho kusuka kuhlaka kuya kohlaka.
15. Ukukhangisa Okukhokhelwayo
Into yokugcina ongayenza ukukhulisa ukuthanda kwakho kwe-Instagram ukuzibandakanya nezinye izindlela zokukhangisa ezikhokhelwayo ze-Instagram.. Ngokujwayelekile, sincoma ukusebenzisa ukukhangisa okukhokhelwayo ukuze ushayele izivakashi ekhasini lokungena lamahhala noma lokuthengisa, kodwa izikhangiso zingakusiza ukuthi uthole ukuthandwa okwengeziwe.
Izinhlelo zokusebenza ezi-4 Ezikhulu Zokuthola Ukuthandwa Okuningi ku-Instagram
Noma kunjalo, le mibono ngeke yanele ukukusiza ukuthi ukhulise ukuthanda kwakho ku-Instagram. Ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza kungakusiza thola ukuthandwa okuningi ku-Instagram. Kungase kuzwakale kuxakile njengokuthenga abalandeli, kepha lesi yisimo esihluke ngokuphelele.
Facebook. Khulisa Social
Kubandakanya zonke izici namakhono abantu abadinga ukuphatha i-akhawunti yabo ye-Instagram abayidingayo.. Uzokwazi ukuchaza amaphrofayili athile okufanele uwalandele, ngaphezu kokuthandwa okuzenzakalelayo. Khulisa Okomphakathi futhi kufaka phakathi umugqa wesikhathi wokushejula Izindatshana Nezindaba.
I-Like4Like ingenye yezinhlelo zokusebenza ezilula kakhulu zokuthola Ukuthandwa. Le software isebenza ngokuqoqa abasebenzisi ndawonye ibenze bathande okuqukethwe abanye abantu ; imiyalezo eminingi oyithandayo, lapho ngithanda kakhulu emuva uthola.
I-Likulator isebenza ngokuhlukile kwezinye izinhlelo zokusebenza zosesho lwe-Jaime. Kwenza ukuzizwisa kujabulise kakhulu ngokukuklomelisa ngezinhlamvu zemali ngokuthanda okuthunyelwe kwabanye abantu nokubuka izikhangiso., ongashintsha ngakho “Ngiyathanda” futhi “okubhaliselwe”. Isofthiwe ihlanganisa nama-hashtag ukukusiza ukuthi uthole ukuduma.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe. Uthanda uHash
Uthanda uHash, Ngokwesinye isandla, ilula futhi kulula ukuyisebenzisa. Uyalwa ukuba ungene ngemvume, bese kwethulwa uhlu lwezihloko kuwena, lapho ungakhetha khona i-hashtag oyithanda kakhulu. Ngemva kokubuka ezinye izikhangiso, uhlelo lokusebenza luzokunikeza amakhulu okuthandwa.
23 Izindlela zika-2021I-Auto Like Instagram: I-Bot Yokuthandwa Okuzenzakalelayo